Nakano Station (4th Sep)
English • Sep 5, 2021
9月4日、我々TTAJチームは、東京の中野駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週はRTM チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
4th of September, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Nakano Station, Tokyo.
We were able to hand out over 550 pamphlets and 550 pocket tissues from 3:00pm till 6:00 pm.
We would like to express our deepest gratitude to Camera Men, Water Donors and especially to our beloved volunteers who came to support us weekly under this vicious heat.
ယမန်နေ့ ၉ လပိုင်း ၄ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Nakano ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီမှ ၆ နာရီ အတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၅၅၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၅၅၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မိုးဖွဲလေးများရွာနေသော်ငြားလည်း မငြီးမငြူဘဲ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ Volunteers များအတွက် ရေဘူးများ လှူဒါန်းပေးပါသောအလှူရှင်များ ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏